Na-aga n’ugwu Zion - nkiri ụgbọala na-adọkpụ na Igbo asụsụ
Ihe karịrị afọ̀ 4,000 gara aga, Chineke gosipụtara onwe ya n’ebe Abraham nọ Mesopotamia ma gwa ya sị, "Si n’obodo gị pụọ, nakwa n’ọnụmara i si, na nakwa ụlọ nna gị, n’ala nke Mụ ga-egosi gị. A ga m eme gị nnukwu mbà." Abraham sọpụụrụ Onyenweanyị ma gaa n’ala ekwere ya na nkwà bụ Canaan ebe ya na nwa ya bụ Isaac na nwa nwa ya bụ Jacob, nke emechara gụ̀gharịa “Izrel” bì
Izrel na ụmụ iri na abụọ (12) ya gara n’obodo Egypt n’ihi nke ụkọ nri dị n’ala Canaan, ma n’ebe ahụ ha mụbara bụrụ mbà ukwu. Ndị obodo Egypt nwere nnukwu egwu ka mbà dị ike dị ka Izrel siri binyere ha, n’ihi ya ha emee ha ohu ma meekwa ndụ ha abụrụ sọ oke nnukwu ahụhụ. Mgbe afọ̀ 430 gachara n’ Egypt, ọ bụ onye ǹdu ha bụ Moses napụtara ha n’oke ahụhụ, ma ha gafere oshimiri Red Sea ma banye n’ime Arabia, ebe ha natara iwu Chineke n’ Ugwu Sinai.
Ụmụ Izrel niile ndị ha na Moses kwụrụ hapụ obodo Egypt enweghị nke bara ala ahụ ekwere na nkwà n’ihi enweghị okwukwe na Chineke. E mere ha ka ha bụrụ ndị ga na-akpagharị n’ime ịkpa ruo afọ̀ iri anọ (40) tutu agbụrụ ọhụrụ apụta ndị tụkwasịrị Onyenweanyị obi ma ha na Joshua abanye na Ala ahụ Ekwere na nkwà.
Ma ihe dịka afọ̀ pụkụ narị anọ (400), agbụrụ iri na abụọ nke Izrel bụ ọkaikpe ka eji achị ha dị ka iwu Moses siri dị. Mgbe ha nwere mmasị inwe eze dị ka ndị mbà ndị ọzọ niile, Chineke họpụtara Saul ka ọ bụrụ eze, onye nke chịrị ha afọ̀ iri anọ (40), osote ya bụ Eze David onye nke chịrị ha afọ̀ iri anọ (40), na nwa David Solomon onye nke chịrị ha afọ̀ iri anọ (40). Mgbe Solomon na-achị, mbà Izrel nwere nnukwu ezigbo otito, ma a rụrụ nnukwu ụlọ okpukpere chi mbụ, mana n’ihi obi Solomon tụgharịrị n’ebe Chineke nọ n’oge nka ya, Chineke a gwa ya na nwa ya agaghị achị agbụrụ iri nke Izrel.
Mgbe Solomon nwụchara, mbà Izrel kewara, ma agbụrụ ugwu iri bụgasị usoro ndị eze ọjọọ na-achị ha, ndị na-esighị n’agbụrụ David na Solomon. Mbà Ugwu a ka hapụrụ aha ha dịka Izrel ma were obodo Samaria dị ka isi obodo ha. Mbà nke obere Ndịda ka amaara dị ka Judah, nwere isi obodo ya dị ka Jerusalem, ma ndị na-achị ya bụ ndị si n’agbụrụ nke David. Bido na 2 Kings 16, ndị si na Mbà Ndịda ka amazịirị dị ka ndị "Ju" weere aha nke mbà Judah.
N’ihi arụlaala na agwa ọjọọ nke Mbà Ụgwu nke Izrel, a napụrụ ha ikike ma mee ha ohù site n’aka ndị Assyrians. Ndị Izrel ndị fọdụrụnụ jụrụ mmekọ ha na ndị mbà nti ike bịara biri n’ala ha. Ndị a bụ ndị amaara dị ka ndị Samaritans, ma agbụrụ iri nke Ugwu Izrel agaghị kwa abụ otu mbà ọzọ.
Ndị Mbà Ndịda nwere ike ị ga ohù n’ime obodo Babylon dị ka ahụhụ ha nwetere maka ifè chi ọzọ òfùfè, ma a ga-akwatù ụlọ òkpukpere chi ha, mana mgbe afọ̀ iri asaa (70) gachara, ndị Ju laghàchiri na Judah, rụgharịa ụlọ òkpukpere chi ha nọ na Jerusalem, ma gaa kwa n’ihu na-achị ha site n’eze si n’agbụrụ David.
N’oge nke Christ, obodo nke Judah bụ nke amaara dị ka Judaea ma ọ nọ n’okpuru ọchịchị nke Rome. Jesus Christi na ndị ụmụazị ya gbasara ọzịọma na mbà Judaea niile na-achọ ụmụ atụrụ nke Izrel furu èfù. Mgbe afọ̀ 3 na ọkara gachara nke nkuzi oziọma ya, ndị Ju jụrụ ịnabata Jesus dị ka Onye Nzọpụta ha ma mee ka onye gọvanọ Rome kpọgbuo ya n’obe. Mgbe abalị atọ (3) gara, o bilitere n’ọnwụ ma gosi ndị ụmụazị ya onwe ya na ndụ̀ tupu ọ lagoro n’eluigwe n’akanri Nna.
Tupu akpọgbuo Jesus n’obe, o buru amụma gbasara ụdị ntaramahụhụ a ga-enweta maka ịjụ ya, A ga-agba Jerusalem ọkụ, a ga-akwatusi ụlọ okpukpere chi, ma ndị Ju ga-aga mbà ndị ọzọ dị ka ndị ohù. Amụma a mezuru na A.D. 70 mgbe emperọ ndị Rome bụ Titus meriri Jerusalem. Ihe karịrị afọ̀ 1800, ndị nọkasịrị ebe niile na mbà ụwa niile.
Ma n’afọ̀ 1948, ihe na-anaghị eme eme mere. E kepụtara Steeti nke Izrel, ma ndị Ju ọzọ kwa e nwere kwa ala ekwere ha na nkwà. Ọtụtụ ndị òtù Christi kwuru na ọ bụ ihe nribaama na ngọzị si n’aka Chineke, mana nke a bụ nnọọ ngọzị si n’aka Onyenweanyị, maọbụ ike ọjọọ a nọ n’ọrụ? Ihenkiri a nwere azịza ahụ.